Guddoomiyihii hore ee Caasimada Maamulka Galmudug oo – Kismaayo24 News Agency
Guddoomiyihii hore ee Caasimada Maamulka Galmudug oo
by admin 27th February 2020 0101
Wararka naga soo gaarayo Magaalada Dhuusamareeb ee Caasimadda Maamulka Galmudug ayaa sheegayo in halkaas Xalay lagu xiray Guddoomiyihii hore ee degmada Dhuusamareeb ugu Magacaawnaa hoggaanka Ahlusunna Axmed Walad Cabdalla.
Guddoomiyihii hore iyo xubnaha la socday ayaa lasoo sheegayaa inay xireen ciidamada ay Dowladda Federaalka Soomaaliya geysay Magaalada Dhuusamareeb.
Xubnaha la xiray ayaa xilliga la xirayey waxay kasoo baxeen Xerada Inji oo xarun u ah hoggaanka Ahlu Susnna ee ku biiray Maamulka Galmudug isla markaasna hadda aan aqoonsaneyn madaxweynaha dowladda ay wadato ee Galmudug Axmed Qoor Qoor.
Sababta loo xiray xubnahaan ayaa lagu sheegay inay tahay amar kasoo baxay madaxda ugu sareyso Maamulka Galmudug oo lagu amray in lagu xadido dhaqdhaqaaqa gelintaanka ama kasoo bixidda Xarunta Inji oo ay gacanta ku hayaan ciidamo ka tirsan kuwa Ahlu Sunna.
Ciidamo Careysan Oo Qabsaday Xarumaha Caabudwaaq.
Uhuru oo 14 maalmood u qabtay Soomaalida Kenya
XOG: K24 Oo Ogaatey Goobaha, Goorta Iyo Qaabka Ay Doorashadda Madaxweynaha Iyo Baarlamanka U Dhaceyso!!
Tifaftiraha K24 7th August 2016
Daawo: Amisom oo Si Rasmi ah Gobolka Shabeellada hoose uga bilowday Howlgalkii uu Farmaajo ku dhawaaqay
admin 7th November 2017 7th November 2017
Shaqaalaha Dawladda oo Qayla-dhaan xooggan ka muujiyey Mushaar la’aan haysata Afar Bilood oo xiriir ah